HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe Mongol Mooré Ndebele Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Zandé Zoloa Éwé
Ampiasao ny pejy 12 ka hazavao ireto:
Inona no antony nilazan’i Jehovah an’ilay fampanantenana tany Edena?
Inona no antony nanaovana an’ilay fifanekena tamin’i Abrahama sy Davida?
Inona no antony nanaovana an’ilay fifanekena hoe hisy mpisorona iray toa an’i Melkizedeka?
1, 2. Inona no hanampy antsika hatoky kokoa hoe hanatanteraka ny fikasan’Andriamanitra ilay Fanjakana, ary nahoana izany no mampahery antsika? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
MATETIKA isika Vavolombelon’i Jehovah no milaza fa ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no ho afaka hamaha ny olana rehetra mahazo ny olombelona. Mazoto mitory momba an’izany isika. Lasa manana fanantenana koa isika noho io Fanjakana io, ary tena mampahery izany. Tena resy lahatra ve anefa isika hoe misy ilay Fanjakana ary ho vitany ny asa hampanaovina azy? Nahoana isika no tena mino an’izany?—Heb. 11:1.
2 Ny Fanjakan’ny Mesia dia fitondrana naorin’ilay Mahery Indrindra mba hanatanterahana ny fikasany momba ny olombelona. Mafy orina ny fototr’io Fanjakana io, satria tsy misy isalasalana mihitsy hoe manana zo hitondra i Jehovah. Nanao fifanekena maromaro i Jehovah mba ho ara-dalàna tsara ny mombamomba an’ilay Fanjakana, anisan’izany ireto: Iza no ho Mpanjakany? Iza no hiara-manjaka amin’ilay Mpanjaka? Aiza no faritra hanjakany ary iza no hanjakany? Ny fifanekena resahina eo dia fifanarahana ifanaovan’i Jehovah na Jesosy Kristy Zanany amin’ny olona hafa. Handinika an’ireny fifanekena ireny isika, mba ho azontsika antoka fa mafy orina ilay Fanjakana ary tena ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra.—Vakio ny Efesianina 2:12.
3. Inona no hodinihintsika ato amin’ity lahatsoratra ity sy ilay manaraka?
3 Resahin’ny Baiboly fa misy fifanekena lehibe enina mifandray amin’ny Fanjakan’ny Mesia, izay tarihin’i Kristy Jesosy. Ireto avy izany: 1) Fifanekena tamin’i Abrahama, 2) fifaneken’ny Lalàna, 3) fifanekena tamin’i Davida, 4) fifanekena hoe hisy mpisorona iray toa an’i Melkizedeka, 5) fifanekena vaovao, ary 6) fifanekena ny amin’ilay Fanjakana. Andao hodinihintsika ny ifandraisan’ireo fifanekena ireo amin’ilay Fanjakana sy amin’ny fahatanterahan’ny fikasan’Andriamanitra momba ny tany sy ny olombelona.—Jereo ilay hoe “ Ahoana no Hanatanterahan’Andriamanitra ny Fikasany?”
FAMPANANTENANA AHITANA NY FOMBA AHATANTERAHAN’NY FIKASAN’I JEHOVAH
4. Inona no nambaran’i Jehovah momba ny olombelona, araka ny hita ao amin’ny Genesisy?
4 Namorona tany tsara tarehy mba honenan’ny olombelona i Jehovah, ary nisy zavatra telo nambarany taorian’izay. 1) Hamorona olona araka ny endriny izy. 2) Hanova ny tany manontolo ho Paradisa ny olona, ary hiteraka ka ho feno olona manao ny marina ny tany. 3) Tsy mahazo mihinana amin’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olona. (Gen. 1:26, 28; 2:16, 17) Efa ampy tsara ireo mba hahatanteraka ny fikasan’i Jehovah. Rehefa avy namorona ny olona izy, dia ireo zavatra roa nolazainy farany sisa no nilaina natao. Nahoana àry no lasa nilaina ny fifanekena?
5, 6. a) Inona no nataon’i Satana mba tsy hahatanteraka ny fikasan’i Jehovah? b) Inona no nataon’i Jehovah rehefa nanohitra azy i Satana tao Edena?
5 Tsy tian’i Satana Devoly ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra, ka nitarika ny olona hikomy izy. Ilay zavatra fahatelo nolazain’Andriamanitra no hitany hoe mora hararaotina indrindra. Mila mankatò an’Andriamanitra ny olona araka io didy io. Naka fanahy an’i Eva àry i Satana, mba hahatonga azy tsy hankatò ka hihinana amin’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. (Gen. 3:1-5; Apok. 12:9) Nanohitra ny zon’i Jehovah hanjaka eo amin’ny zavatra noforoniny i Satana tamin’izany. Nilaza koa izy tatỳ aoriana fa tia tena ny olona matoa tsy mivadika amin’i Jehovah.—Joba 1:9-11; 2:4, 5.
6 Inona no nataon’i Jehovah rehefa nanohitra azy i Satana tao Edena? Ho nifarana tokoa ilay fikomiana raha noringaniny ireo mpikomy. Raha izany anefa no nataony, dia tsy ho tanteraka ilay fikasany hoe ho feno olona mankatò taranak’i Adama sy Eva ny tany. Hendry ilay Mpamorona, ka tsy novonoiny avy hatrany ireo mpikomy. Nilaza faminaniana lehibe iray kosa izy, mba ho azo antoka fa ho tanteraka an-tsakany sy an-davany ny fikasany. Io ilay fampanantenana tany Edena.—Vakio ny Genesisy 3:15.
7. Inona no hanjo an’ilay menarana sy ny taranany, araka ilay fampanantenana tany Edena?
7 Rehefa nilaza an’ilay fampanantenana tany Edena i Jehovah, dia nanameloka an’ilay menarana sy ny taranany, izany hoe i Satana Devoly sy ireo namany manohitra ny zon’i Jehovah hitondra. Nomen’i Jehovah fahefana mba handringana an’i Satana ny taranak’ilay vehivavy. Nahariharin’io fampanantenana io àry fa hofoanana ilay nitarika ny fikomiana tao Edena sy ny voka-dratsin’ilay fikomiana. Hita tamin’izy io koa ny fomba hanafoanana an’ireo.
8. Inona no fantatsika momba an’ilay vehivavy sy ny taranany?
8 Iza no taranak’ilay vehivavy? Hanorotoro ny lohan’ilay menarana izy io, izany hoe ‘hanafoana’ an’ilay zavaboary tsy hita maso atao hoe Satana Devoly. Tsy maintsy ho zavaboary tsy hita maso koa àry ilay taranaka. (Heb. 2:14) Midika izany fa tsy hita maso koa ilay vehivavy iavian’ilay taranaka. Nihamaro ny taranak’ilay menarana. Tsy fantatra kosa ilay vehivavy sy ny taranany, raha tsy efa ho 4 000 taona taorian’ny nilazana an’ilay fampanantenana tany Edena. Nanao fifanekena maromaro i Jehovah tao anatin’izany fotoana izany, satria te hampahafantatra hoe iza ilay taranaka. Te hanome toky ny mpanompony koa izy fa io taranaka io no hanafoana ny loza nentin’i Satana.
FIFANEKENA MAMPAHAFANTATRA AN’ILAY TARANAKA
9. Inona ilay fifanekena tamin’i Abrahama, ary oviana izy io no nanomboka nanan-kery?
9 Nandidy an’i Abrahama mba hiala tao Ora any Mezopotamia i Jehovah, roa arivo taona teo ho eo taorian’ny namoahan’i Jehovah ny didim-pitsarana momba an’i Satana. Nasainy nankany Kanana i Abrahama. (Asa. 7:2, 3) Hoy i Jehovah taminy: “Mialà amin’ny taninao sy ny havanao ary ny ankohonan-drainao, ka mankanesa any amin’ny tany izay hasehoko anao. Ary hataoko misy firenena lehibe avy aminao. Hitahy anao aho, ary hataoko malaza ny anaranao. Koa aoka ianao ho fitahiana ho an’ny olona. Ary hitahy izay mitso-drano anao aho, fa hanozona kosa an’izay miantso loza ho anao. Ary ny firenena rehetra eny ambonin’ny tany dia hanao izay hahazoany fitahiana amin’ny alalanao.” (Gen. 12:1-3) Eo no fitantarana an-tsoratra voalohany momba ny fifanekena tamin’i Abrahama, izany hoe ilay fifanekena nataon’i Jehovah Andriamanitra tamin’i Abrahama. Tsy fantatra hoe oviana marina no voalohany nanaovan’Andriamanitra an’io fifanekena io. Nanomboka nanan-kery anefa izy io tamin’ny 1943 T.K., rehefa niala tao Harana i Abrahama ka niampita ny Reniranon’i Eofrata, tamin’izy 75 taona.
10. a) Ahoana no nampisehoan’i Abrahama fa tena nino ny fampanantenan’Andriamanitra izy? b) Inona ny tsipiriany nambaran’i Jehovah tsikelikely momba ny taranak’ilay vehivavy?
10 Naverin’i Jehovah imbetsaka tamin’i Abrahama ilay fampanantenany, ary nilaza tsipiriany fanampiny izy. (Gen. 13:15-17; 17:1-8, 16) Vonona hanao sorona ny zanany lahitokana i Abrahama, ka hita hoe tena nino ny fampanantenan’Andriamanitra. Nohamafisin’i Jehovah àry ilay fifanekena ka nanome toky izy fa ho tanteraka ny fampanantenany. (Vakio ny Genesisy 22:15-18; Hebreo 11:17, 18.) Nambaran’i Jehovah tsikelikely ireo tsipiriany lehibe momba ny taranak’ilay vehivavy, rehefa nanomboka nanan-kery ny fifanekena tamin’i Abrahama. Nolazainy fa ho taranak’i Abrahama izy io, ho maro be, ho mpanjaka, handringana ny fahavalon’Andriamanitra rehetra, ary hitondra fitahiana ho an’ny olona maro.
Nasehon’i Abrahama fa tena nino ny fampanantenan’Andriamanitra izy (Fehintsoratra 10)
11, 12. Ahoana no ampisehoan’ny Soratra Masina fa mbola ho tanteraka amin’ny hoavy ny fifanekena tamin’i Abrahama, ary midika inona ho antsika izany?
11 Tanteraka ilay fifanekena tamin’i Abrahama, rehefa nandova ny Tany Nampanantenaina ny taranany. Asehon’ny Soratra Masina anefa fa mbola ho tanteraka koa izy io amin’ny hoavy. (Gal. 4:22-25) Nohazavain’ny apostoly Paoly fa i Kristy no voalohany amin’ilay taranak’i Abrahama, rehefa ho tanteraka fanindroany ilay fifanekena, ary anisan’io taranaka io koa ny Kristianina voahosotra 144 000. (Gal. 3:16, 29; Apok. 5:9, 10; 14:1, 4) Antsoina hoe “Jerosalema any ambony” ilay vehivavy iavian’ilay taranaka. Io vehivavy io dia ny ampahany any an-danitra amin’ny fandaminan’Andriamanitra, izany hoe ny fitambaran’ireo zavaboary ara-panahy tsy mivadika. (Gal. 4:26, 31) Hitondra fitahiana ho an’ny olombelona ny taranak’ilay vehivavy, araka ny voalazan’ilay fifanekena tamin’i Abrahama.
12 Hita amin’ilay fifanekena tamin’i Abrahama fa hanana Mpanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra ary hisy olon-kafa hiara-manjaka amin’izy io. Io fifanekena io koa no antoka fa tena hisy ilay Fanjakana. (Heb. 6:13-18) Hafiriana no hanan-kery io fifanekena io? Milaza ny Genesisy 17:7 fa “fifanekena mandritra ny fotoana tsy voafetra” izy io. Hanan-kery izy io mandra-pandringan’ny Fanjakan’ny Mesia an’ireo fahavalon’Andriamanitra ka hahazo fitahiana ny firenena rehetra eto an-tany. (1 Kor. 15:23-26) Hitondra soa mandrakizay ho an’ireo hiaina eto an-tany anefa ilay fifanekena. Hita amin’ilay fifanekena tamin’i Abrahama fa tapa-kevitra hanatanteraka ny fikasany i Jehovah, dia ny hoe ho feno olona manao ny marina ny tany.—Gen. 1:28.
FIFANEKENA MANOME ANTOKA FA HAHARITRA ILAY FANJAKANA
13, 14. Inona no toky ananantsika momba ny fitondran’ny Mesia, rehefa jerena ny fifanekena tamin’i Davida?
13 Asehon’ilay fampanantenana tany Edena sy ny fifanekena tamin’i Abrahama fa ny fitsipika marin’i Jehovah no fototra iorenan’ny fitondrany. Ireo fitsipika ireo koa àry no fototra iorenan’ny Fanjakan’ny Mesia. (Sal. 89:14) Mety ho lasa ratsy ve ny fitondran’ny Mesia ka tsy maintsy hesorina? Tsy hitranga mihitsy izany, raha jerena ny fifanekena iray hafa.
14 Diniho ny zavatra nampanantenain’i Jehovah an’i Davida mpanjakan’ny Israely, ao amin’ilay fifanekena tamin’i Davida. (Vakio ny 2 Samoela 7:12, 16.) Tamin’i Davida nanjaka tao Jerosalema i Jehovah no nanao an’io fifanekena io. Nampanantena izy tamin’izay fa ho avy amin’ny taranak’i Davida ny Mesia, ka lasa niharihary kokoa ny firazanan’ilay taranaka. (Lioka 1:30-33) Nolazain’i Jehovah fa ‘hanan-jo ara-dalàna’ ho Mpanjakan’ny Fanjakan’ ny Mesia ny iray amin’ny taranak’i Davida. (Ezek. 21:25-27) I Jesosy io taranany io. “Haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra” izy, ary ‘haharitra toy ny masoandro ny seza fiandrianany.’ Noho izany, dia “ho mafy orina mandritra ny fotoana tsy voafetra” ny fanjakan’i Davida. (Sal. 89:34-37) Tsy ho lasa ratsy mihitsy àry ny fitondran’ny Mesia, ary haharitra mandrakizay ny soa entiny.
FIFANEKENA FA HISY MPISORONA
15-17. Inona koa no asa hataon’ilay taranaka, araka ilay fifanekena hoe hisy mpisorona iray toa an’i Melkizedeka? Nahoana izany no ilaina?
15 Manome antoka ny fifanekena tamin’i Abrahama sy ny fifanekena tamin’i Davida fa ho lasa mpanjaka ny taranak’ilay vehivavy. Tsy ampy anefa izany. Raha tiana handray fitahiana mantsy ny olona any amin’ny firenena rehetra, dia mila afahana amin’ny ota sy ampiana ho lasa anisan’ny fianakaviamben’i Jehovah. Tsy maintsy manao ny asan’ny mpisorona àry ilay taranaka. Ahoana no hahatanteraka an’izany? Hendry ny Mpamorona ka nanao fifanekena iray hafa, dia ilay fifanekena hoe hisy mpisorona iray toa an’i Melkizedeka.
16 Nampahafantarin’i Jehovah tamin’ny alalan’i Davida Mpanjaka fa hanao fifanekena amin’i Jesosy izy. Roa ny tanjony amin’izany: 1) ‘Hipetraka eo ankavanany’ i Jesosy mandra-panjakany eo amin’ny fahavalony. 2) Ho ‘mpisorona mandritra ny fotoana tsy voafetra tahaka an’i Melkizedeka’ i Jesosy. (Vakio ny Salamo 110:1, 2, 4.) Nahoana no hoe “tahaka an’i Melkizedeka”? Satria efa “mpisoron’ilay Andriamanitra Avo Indrindra” i Melkizedeka, mpanjakan’i Salema, ela be talohan’ny nahazoan’ny taranak’i Abrahama ny Tany Nampanantenaina. (Heb. 7:1-3) I Jehovah mihitsy no nanendry an’i Melkizedeka ho mpisorona, ary izy irery no lazain’ny Soratra Hebreo hoe sady mpanjaka no mpisorona. Azo antsoina hoe “mpisoronabe mandrakizay” koa izy, satria tsy voalaza hoe nisy mpisorona nodimbiasany na nandimby azy.
17 I Jehovah mihitsy no nanendry an’i Jesosy ho mpisorona, noho io fifanekena nataony taminy io. Ho ‘mpisorona mandrakizay tahaka an’i Melkizedeka’ i Jesosy. (Heb. 5:4-6) Hita amin’io fifanekena io fa manome antoka i Jehovah hoe hampiasa ny Fanjakan’ny Mesia izy mba hahatanteraka ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona.
ARA-DALÀNA ILAY FANJAKANA NOHO IREO FIFANEKENA
18, 19. a) Inona no ifandraisan’ireo fifanekena nodinihintsika, amin’ilay Fanjakana? b) Inona no fanontaniana hovaliana ao amin’ny lahatsoratra manaraka?
18 Hitantsika tamin’ireo fifanekena nodinihintsika teo hoe inona no ifandraisan’izy ireo amin’ny Fanjakan’ny Mesia, ary nahoana izy ireo no mahatonga an’ilay Fanjakana ho mafy orina. Manome antoka ilay fampanantenana tany Edena hoe hampiasa ny taranak’ilay vehivavy i Jehovah, mba hanatanteraka ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona. Iza anefa io taranaka io ary inona no asa hataony? Ilay fifanekena tamin’i Abrahama no ahafantarana an’izany.
19 Ny fifanekena tamin’i Davida indray dia ahalalana bebe kokoa ny firazanan’ny voalohany amin’ilay taranaka. Manome azy ny zo hanjaka mandrakizay amin’ny tany manontolo koa io fifanekena io. Ary ahoana ilay fifanekena hoe hisy mpisorona iray toa an’i Melkizedeka? Manome antoka izy io fa hanao ny asan’ny mpisorona ilay taranaka. Tsy i Jesosy irery anefa no hamerina ny olombelona ho lavorary. Hisy olon-kafa koa hotendrena ho mpanjaka sady mpisorona. Avy aiza izy ireo? Hovaliana ao amin’ny lahatsoratra manaraka izany.
AHOANA NO HANATANTERAHAN’ANDRIAMANITRA NY FIKASANY?
Hita amin’ilay fampanantenana tany Edena fa mampiasa ny Fanjakany Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasany momba ny tany sy ny olombelona. Natao mba hanatanterahana ny fikasany ireto fifanekena enina ireto:
FIFANEKENA TAMIN’I ABRAHAMA
NATAON’I Jehovah tamin’i Abrahama
ANTONY: Manome antoka fa ho mpitondra ao amin’ilay Fanjakana ny ‘taranak’ilay vehivavy’ resahin’ny Genesisy 3:15
NATAON’I Jehovah sy ny firenen’Israely
ANTONY: Miaro an’ilay ‘taranaka’ sady manampy ny olona hamantatra an’ilay Mesia
FIFANEKENA TAMIN’I DAVIDA
NATAON’I Jehovah tamin’i Davida
ANTONY: Mampahafantatra fa ho avy amin’ny taranak’i Davida ny Mesia Mpanjaka, ary haharitra mandrakizay ny soa hoentin’ilay Fanjakana
FIFANEKENA HOE HISY MPISORONA IRAY TOA AN’I MELKIZEDEKA
NATAON’I Jehovah tamin’i Jesosy
ANTONY: Manome antoka fa ho mpanjaka sady mpisorona mandrakizay i Jesosy, izay voalohany amin’ny ‘taranak’ilay vehivavy’
NATAON’I Jehovah tamin’ny Kristianina voahosotra
ANTONY: Manome antoka fa hisy Kristianina 144 000 hatsangana ho zanak’Andriamanitra. Ho anisan’ny ‘taranak’ilay vehivavy’ koa izy ireo
FIFANEKENA NY AMIN’ILAY FANJAKANA
NATAON’I Jesosy tamin’ny Kristianina voahosotra
ANTONY: Natao izy io mba ho ara-dalàna ny hoe ho mpanjaka sy mpisorona hiaraka amin’i Kristy any an-danitra ny Kristianina voahosotra